डाइक बलियो प्रत्याशी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
डाइक बलियो प्रत्याशी
श्रावण ११, २०७६ बीबीसी
लन्डन — युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र पीएफए प्लेयर अफ द इयर विजेता, के यति उपलब्धिपछि लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकले बालोन डे’अर जित्ने छन् त ? उनी यो अवार्ड जित्नका लागि यसपल्टका सबैभन्दा बलिया प्रत्याशीमध्ये एक हुन् ।
यी डच डिफेन्डर आफैं भन्छन्, ‘साँच्चै मैले त्यो अवार्ड जितें भने त्यो अविश्वसनीय हुनेछ अनि यसमा मलाई उत्तिकै गर्व पनि हुनेछ ।’ के साँच्चै डायकले जित्ने छन् त यो प्रतिष्ठित अवार्ड ?
अरू को को हुन सक्छन् प्रत्याशी ? विश्लेषण गरौं न त । वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने अवार्ड हो, बालोन डे’अर । यसअघिसम्म यो अवार्ड जित्ने खेलाडी प्रत्येक वर्ष फरक–फरक हुन्थे, सन् २००८–२०१७ बीच भने यो अपवाद रह्यो । यसबीच यो अवार्ड पालैपालो जस्तो अर्जेन्टिनी लियोनल मेसी र पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जिते । गत वर्षमात्र यो क्रममा पूर्णविराम लाग्यो, जति बेला रियल म्याड्रिडका मिडफिल्डर लुका मोड्रिचले अवार्ड जिते ।
त्यसको कारण थियो, उनको क्लबले च्याम्पियन्स लिग जित्यो । साथै मोड्रिचको देश क्रोएसियाले विश्वकपमा फाइनल यात्रा तय गर्‍यो । यी सबै तथ्यले देखाउँछ, साधारणतया अवार्ड कसले बढी जित्छ । प्रायः अवार्ड फरवार्डले जित्छ, होइन भने क्रिएटिभ मिडफिल्डरले । प्रायः यी खेलाडीले च्याम्पियन्स लिग जितेको हुन्छ । सन् २००६ मा अन्तिमपल्ट कोही डिफेन्डरले यो अवार्ड जितेको थियो । ती थिए, इटालीको विश्वकप २००६ विजेता टिमका कप्तान फाबियानो कानोभारो ।
त्यसयता १२ विजेतामध्ये ९ ले च्याम्पियन्स लिग पनि जितेका छन् । जस्तो काका, रोनाल्डो, मेसी र मोड्रिच । दुई खेलाडीको भने अपवाद घटना छ, सन् २०१२ मा ९१ र २०१० मा ६० गोल गरेवापत मेसी र सन् २०१३ मा ६६ गोल गरेवापत रोनाल्डोलाई यो अवार्ड प्रदान गरियो । सैद्धान्तिक रूपमा एक क्यालेन्डर वर्षका लागि यो अवार्ड दिइन्छ, तर खासमा अवार्ड भने त्यसको पछिल्लो सिजन गरेको प्रदर्शनलाई बढी आधार मानिन्छ । अवार्डको प्रारम्भिक सूची अक्टोबरमा आउँछ भने विजेताको नाम डिसेम्बरमा घोषणा गरिन्छ ।
युरोपेली च्याम्पियन लिभरपुलका खेलाडीमध्ये उत्कृष्टमा अगाडि पर्छन् २८ वर्षे भान डाइक । यस्तोमा उनले अवार्ड जित्ने सम्भावना बढी छ, यसअघिका अवार्डले स्थापित गरेको ट्रेन्डलाई मान्ने हो भने । उनी कीर्तिमान ७ करोड ५० लाख पाउन्डमा साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुल आएका थिए । यसक्रममा उनले अब्बल दर्जाको रक्षापंक्तिको खेल प्रदर्शन गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनमा नेतृत्वको राम्रो गुण पनि देखिएको छ ।
गत सिजन उनले लिरभपुलका लागि लिगका सबै खेल खेले । खाली २२ गोललाई अवसरमात्र दिए । युरोपमा ६ प्रमुख लिगमा सबैभन्दा कम गोल खाएको टिम लिभरपुल नै रह्यो । यसै क्रममा लिभरपुलले ९७ अंक बटुल्यो र यो लिग विजेता म्यानचेस्टर सिटीभन्दा एक अंकको मात्र दूरी हो । अझ डाइकबारे त्यो भन्दा पनि ठूलो तथ्यांक छ, जसमा उनलाई वास्तवमै गर्व लाग्नेछ । त्यो हो सन् २०१८ यता अहिलेसम्म कोही पनि खेलाडीले ६४ खेलमा उनलाई छक्याएर ड्रिब्लिङ गर्दै बल अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
डाइकको नाममा अरू पनि राम्रो प्रदर्शन जोडिएका छन् । जस्तो, युरोपका शीर्ष पाँच लिगको पछिल्लो सिजनमा हजार मिनेटभन्दा बढी खेल्ने उनी एकमात्र खेलाडी हुन् । यस्तै उनले युरोपका पाँच लिगमा सबैभन्दा राम्रो रक्षापंक्तिको खेल प्रदर्शन गरेका छन्, २० खेलमा क्लिन सिट राखेर । उनले डिफेन्डर भएर पनि सबैभन्दा बढी पास खेलेका छन्, ३०३७ ।
त्यो पनि ९० प्रतिशत सफलताका हिसाबले । अवार्डको दौडमा लिभरपुलकै गोलरक्षक एलिसन बेकर र अग्रपंक्तिका साडियो माने र मोहम्मद सलाह पनि छन् । साथमा सदाबहार मेसी र रोनाल्डो पनि । यी सबै नाममध्ये पनि के सायद डाइक नै अगाडि छन् त ?
–इमली बेग्ली प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ ०८:००
श्रावण १०, २०७६ बीबीसी
लन्डन — टोटेनहमले अन्तिम पटक लिग जितेको पनि ५८ वर्ष भइसकेको छ । त्यो त्यही समय हो, जति बेला बिटल्सले आफ्नो पहिलो गीत जारी गरेको थियो । इंग्ल्यान्डले विश्वकप जित्न अझै १० वर्ष बाँकी थियो । सबै प्रकारका अविश्वास चिर्दै अब टोटेनहमसँग आफ्नै रंगशालामात्र छैन, विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्न मिल्ने अभ्यास मैदान पनि छ ।
क्लबले त्यस्ता व्यवस्थापकलाई पनि आफूसँग राखेको छ, जसलाई रियल म्याड्रिड र म्यानचेस्टर युनाइटेड दुवैले आँखा लगाएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, १२ महिनाअघि इंग्ल्यान्डले विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रा तय गर्दाका सात खेलाडी अहिले यही टिममै छन् । टिमले आफ्नो स्थानान्तरणको कीर्तिमान पनि तोडेको छ, लियोनबाट ५ करोड ३८ लाख पाउन्डमा मिडफिल्डर टनगाय एनडोमबेलेलाई किनेर । गत सिजन क्लबको इतिहासमै पहिलोपल्ट युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेको टोटेनहम के अहिले सही दिशामा छ त ? टोटेनहमले अबको सिजन केही गर्न सक्ने छ त ?
एसियाको १० दिने अभ्यास भ्रमणअघि व्यवस्थापक माउरिसियो पोचेटिनो मिडियासामु बसे । उनलाई सोधिएको थियो, गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा लिरभपुलसँग पराजित भए पनि त्यो यात्रा के नयाँ सिजनका लागि प्रेरणादायी हुनेछ त ?
पोचेटिनोलाई तुलना गरेको मनपर्दैन । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो चार सिजन कम बजेटमै टोटेनहम जसरी शीर्ष चारमा रहन सक्यो, त्यो भने टोटेनहमका लागि प्रेरणा हो ।’ खासमा पछिल्लो एक दशकमा टोटेनहम शीर्ष ६ भन्दा बाहिर परेको छैन ।
त्यसबीचमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले एक–एकपल्ट त्यस्तो अनुभव बेहोरेको छ भने लिभरपुल त तीन अवसरमा यस्तो स्थितिबाट गुज्रेको छ । सन् २०१७–२०१८ मा टोटेनहम बढी कमाउनेमा लिगको छैटौं स्थानमा रह्यो । त्यसबीच टोलीले सबैभन्दा बढी नाफा पनि कमायो । तर यो ३ सय ८० करोडको टर्न ओभर म्यानचेस्टर युनाइटेडको अगाडि ६४.५ प्रतिशतमात्र हो । टोटेनहमले तबलमा मात्र १४ करोड ८० लाख पाउन्ड खर्चेको थियो । यो पनि छैटौंमा पर्छ ।
पोचेटिनो भन्छन्, ‘हामी त्यस्ता टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, जसले अविश्वसनीय ढंगले लगानी गर्न सक्छ । हाम्रो विशेषता भनेको त्यस्तै टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु हो । पोचेटिनोलाई लिएर हुने सबैभन्दा बढी आलोचना भनेकै यी ४७ वर्षीय अर्जेन्टिनीले कुनै पनि उपाधि जित्न नसक्नु हो । सन् २०१४ मा उनी साउथह्याम्पटनबाट टोटेनहम आएका थिए । १९८४ मा यूईएफए कप जितेको टोटेनहमले २००८ मा अन्तिमपल्ट लिग कप जितेको थियो ।
सन् १९५६–१९६७ का बीच गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण टोटेनहमलाई अझै पनि इंग्ल्यान्डका ठूला चार क्लबमा गणना गरिन्छ । आर्सनल, लिभरपुल र म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगै । १९६१ वर्ष सबैभन्दा अब्बल रह्यो, जति बेला टिमले घरेलु फुटबलमा डबल गरेको थियो, लिग र कप दुवै जितेर । २०१७ पनि टोटेनहमका लागि उल्लेखनीय वर्ष रह्यो, जति बेला २१ सिजनयता पहिलोपल्ट टिम उत्तरी लन्डन प्रतिद्वन्द्वी आर्सनलभन्दा लिगमा अगाडि रह्यो ।
पोचेटिनो सुरुका वर्षमा भन्ने गर्थे, टोटेनहम ठूला क्लबमा पर्दैन । अहिले यसमा परिवर्तन आएको छ र यसका पनि तीन स्पष्ट कारण छन् । पहिलो, क्लबले आफ्नै एकेडेमीबाट उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरेको छ । जस्तै ह्यारी केनदेखि लिएर ह्यारी विन्ङससम्म । अनि उत्तिकै राम्रा नयाँ खेलाडी पनि अनुबन्ध गर्न सकेको छ । डेल अली, ड्यानी रोस र एरिक डायरजस्ता । दोस्रो, टोटेनहमसँग त्यस्तो अभ्यासस्थल छ, जहाँ १५ घाँसे मैदान छन् । यसलाई युरोपकै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०१८ को विश्वकपका लागि भनेर ब्राजिलले यसलाई तयारीका लागि रोजेको थियो ।
तेस्रो कारण, टोटेनहमको घरेलु मैदान ६२ हजार दर्शक क्षमताको छ । बन्न निकै लामो समय लागे पनि यसको प्रशंसा नगरेर सुखै छैन । यस्तोमा आलोचकले पनि मान्न थालेका छन्, पछिल्लो केही वर्षयता टोटेनहममा धेरैथोक भएको छ । प्रश्न हो, अब यी सबै कारणले टिम केही ठूलो उपाधि जित्न सफल हुन्छ कि हुन्न ?
– सिमोन स्टोन
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:४४